မွနျမာပွညျ ဒီလိုအခွအေနဖွေဈလာမှာကို လှနျခဲ့တဲ့ ဆယျနှဈကြျောကတညျးက ခနျ့မှနျးနိုငျခဲ့သူတဈဦးရှိခဲ့ - Shwe Khit
မွနျမာပွညျ ဒီလိုအခွအေနဖွေဈလာမှာကို လှနျခဲ့တဲ့ ဆယျနှဈကြျောကတညျးက ခနျ့မှနျးနိုငျခဲ့သူတဈဦးရှိခဲ့
January 16, 2022 January 14, 2022 by Zaw Hein
မွနျမာနိုငျငံမှာ ဒီနဒေီ့လို စဈမီးထတောကျမယျဆိုတာ Joshua Cooper Ramoက ၂၀၀၉လောကျကတညျးကမှနျးခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီဂြော့ရှာကူပါးရာမို ဆိုသူဟာ Kissinger Associatesရဲ့ vice chairman and co-chief executive ဖွဈပါတယျ။
တကယျတမျးပွောရရငျ ကနြျောက ဟငျနရီကဈဆငျးဂြာကိုမကွိုကျပါ။ လူလညျကွီးလို့မွငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ကမ်ဘာ့အရေးအခငျးတှမှော သူတို့ဘယျလိုမွငျသလဲဆိုတာကလညျး အရေးကွီးပါတယျ။
သူ့ရဲ့”The Age of the Unthinkable”က ကမ်ဘာ့အရေးအခငျးတှအေကွောငျးဆကျစပျနားလညျလိုသူတှေ ဖတျသငျ့တဲ့စာအုပျပါ။ ဇာတျလမျးကဘယျကစသလဲဆိုတော့ နကျဆငျးတာလပျ (Nassim Taleb)က The Black Swam ဆိုတဲ့စာအုပျကိုရေးပါတယျ။ အဲ့ဒီမှာသူက အခြို့ကမ်ဘာ့အရေးအခငျးတှဟော ကွိုတငျမှနျးဆထားလို့ မရဘူးလို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
ဥပမာ ၉၁၁တိုကျခိုကျမှု၊ ၂၀၀၄ဆူနာမီလိုဟာမြိုး၊ ၁၉၈၇စတော့ဈေးကှကျပကျြမှုမြိုးတှကေို ဆိုလိုတာပါ။ ဒါကိုဂြော့ရှာရာမိုက ပွနျငွငျးပါတယျ။ သူက မှနျးလို့ရတာတှရှေိတယျ။ မီးအသေးက မီးအကွီးကွီးလောငျမှာကို တားဆီးပေးတတျသတဲ့။
ဆီးရီးယားလို အာဏာရှငျစနဈအောကျက နိုငျငံမြိုးဟာ volatile ထပေါကျကှဲလှယျတယျလို့ သူကကွိုတငျမှနျးဆခဲ့တယျ။ အီတလီလိုနိုငျငံမြိုးမှာ လူထုဆန်ဒပွမှုတှေ ဖွဈနတော ခဏခဏဆိုပမေယျ့ စနဈတဈခုလုံးပွောငျးလောကျအောငျ မဖွဈဘူးတဲ့။ အမရေိကနျမှာလညျး လူဖွူလူမညျးပွဿနာအရေးအခငျးမြိုးတှေ ထဖွဈတတျတာပဲ။ ဒါပမေဲ့ မီးအကွီးကွီးလောငျမှာ မစိုးရိမျရဘူး။
အဲ့မှာသူပွောထားတာက “Syria or North Korea or Burma do not have small burns;afire there could quickly becomeadevastating catastrophe.”တဲ့။
ဆီးရီးယား၊ မွောကျကိုရီးယားနဲ့ မွနျမာနိုငျငံတှမှော လူထုအုံကွှမှုအသေးလေးတှေ ခဏခဏမဖွဈအောငျ ထိနျးခြုပျထားတယျ။ အေး…မဖွဈလိုကျနဲ့။ ဖွဈလိုကျရငျတပွညျလုံးမီးဟုနျးဟုနျးတောကျမယျ့ အုံကွှမှုကွီး ထဖွဈနိုငျတယျလို့ လှနျခဲ့တဲ့ ၁၀နှဈကြျောကတညျးကမှနျးထားခဲ့တယျ။
သူမှနျးတဲ့အတိုငျးဖွဈလာခဲ့တယျ။ ဆီးရီးယားလညျးပွညျတှငျးစဈအကွီးအကယျြထဖွဈသလို၊ မွနျမာပွညျလညျး ယနအေ့ခွအေနထေဖွဈတာပဲ။ “သဘောက တိုငျးပွညျငွိမျသကျရငျပွီးရော ငါတို့က ဘာနိုငျငံရေးမှ စိတျမဝငျစားဘူးလို့ လုပျနလေို့မရဘူး” အာဏာရှငျ အုပျစိုးတဲ့ နိုငျငံတိုငျးမှာ မဖွဈနဲ့ဖွဈရငျအကွီးကွီးထဖွဈတတျတယျဆိုတာ သိထားဖို့လိုတယျ။
သူပွောထားတာရှငျးတယျ။ ရတေိုနဲ့ရရှေညျကို တှကျပွသှားတာ။ In the short run, low volatility means stability. ရတေိုမှာတော့ လူထုက အသံမထှကျဘူးဆိုရငျ တိုငျးပွညျတညျငွိမျတယျလို့ယူဆကွတယျ။
In the long run, though, low voltality leads to increased vulnerability. ရရှေညျမှာ အဲ့လိုအသံမထှကျပဲ လူတှမေကနြေပျတာက ပိုပွီးကွောကျဖို့ကောငျးပါသတဲ့။
၂၀၁၂ဦးသိနျးစိနျခတျေမှာသှားပွောရငျ အရူးလို့ထငျကွမယျ။ ဦးသိနျးစိနျခတျေမှာ နိုငျငံခွားဝငျငှအေမြားကွီးရတယျ။ ကမ်ဘာ့နိုငျငံ့ခေါငျးဆောငျတှကေ တကယျအာဏာမသိမျးတော့ဘူးထငျပွီး ခြီးကြူးကွတယျ။ ခြောငျးပေါကျအောငျလာလိုကျတဲ့ သမ်မတတှဆေိုတာ နတေို့ငျးလိုလို တှရေ့တယျ။
မွနျမာပွညျတကယျပှငျ့ပွီဟဲ့ဆိုပွီး ထောကျပံ့ငှတှေေ၊ ခြေးငှတှေေ၊ ရငျးနှီးမွှုပျနှံငှတှေေ ဝေါကနဲဝငျခလြာတယျ။ ဦးသိနျးစိနျကလညျး ရသမြှကို ရတေိုအတှကျပုံအောသုံးတယျ။ မုနျ့ဝတေဲ့ခတျေပေါ့။ လူတှလေကျထဲငှရေောကျပွီး ပြျောစရေမယျ။
ဒါပမေယျ့ရရှေညျအတှကျ ဘာမှသခြောမစီမံနိုငျခဲ့ဘူး။ နောကျနောငျအာဏာမသိမျးအောငျ သူအာမမခံနိုငျခဲ့ဘူး။ အိမျဈေးမွဈေေးတှထေိုးတကျတော့လူတှပြေျောကွတယျ။ တကယျတော့ ပုံမှနျတဈလ (၅)သိနျးဝငျတဲ့လူတဈယောကျက ရိုးရိုးသားသားရှာဖှရေငျ အနညျးဆုံးသိနျး (၅၀၀)လောကျပေါကျတဲ့ တိုကျခနျးကို ဘယျလိုဝယျမလဲ ရရှေညျအတှကျမတှေးခဲ့ဘူး။
အဲ့ဒီခတျေမှာ ခရိုနီတှေ၊ ပရောဂကျြရသူတှေ၊ မွသေမားတှအေကွီးအကယျြကွီးပှားတာပဲမွငျခဲ့ကွတယျ။ ပွညျပကနေ မွနျမာ့မွဈေေးကှကျကို ဝငျမှပွေီး ငှထေုပျပိုကျလဈသှားတဲ့ မြောကျအဝယျတျောတှကေို မမွငျခဲ့ကွဘူး။
ပိုဆိုးတာက အထှကျမှာ ထှကျကနျကနျပွီး နိုငျငံပိုငျမွတှေကေို လကျသိပျထိုးရောငျးခဲ့တာ။ ထှကျခါနီးမှ ကိုယျ့လူကိုကိုယျကွိတျပွီး ပရောဂကျြတှပေေးခဲ့တာတပွုံကွီးပဲ။
အနျအယျလျဒီ လကျထကျမှာကပြွနျတော့ ထိနျးခြုပျမှုတှလေုပျပမေယျ့လညျး တဖကျမှာ လုပျသငျ့တာကိုမလုပျ၊ မလုပျသငျ့တာတှကေို လုပျခဲ့တာတှရှေိနပွေနျတယျ။
ကနြျောတို့က ထောကျပွရငျတောငျမှ အရောငျမြိုးစုံတပျပွီး ဆဲကွသေးတယျ။ပိုဆိုးတာက အမတျအခြို့က နရေ့ောညပါ ဖိပွီးမကွိုးစားတာ။ အရိပျခိုလိုကျနခေဲ့တာ။ ထားပါတော့။ အခုရခဲ့တဲ့သငျခနျးစာအရ ကနြျောတို့အနနေဲ့ ကမ်ဘာ့အရေးကို ပိုမိုလလေ့ာသငျ့တယျလို့ မွငျတယျ။
Kissinger Associates ကလူတှရေဲ့အမွငျကိုလညျး “ကိုယျ့တိုငျးပွညျရဲ့အနာဂတျကို သူတို့ဘယျလိုမွငျသလဲ”ဆိုတာ သတိနဲ့စောငျ့ကွညျ့သငျ့တယျ။ ကနြျောတို့တှဟော မကျြတောငျတဈဆုံးပဲကွညျ့ပွီး ဆူလှယျဆဲလှယျနလေို့မရဘူး။ ရရှေညျမှာ ဘာဖွဈနိုငျတယျဆိုတာကို ကွိုတှကျသငျ့ လိမ်မာပါးနပျသငျ့ပွီလို့မွငျပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံဟာ အာဏာရှငျစနဈအောကျမှာနရေသ၍ ဘယျတော့မှအေးခမျြးနတေယျလို့ပွောလို့မရပါ။ အာဏာရှငျစနဈအောကျကို ပွနျသှားတာနဲ့ တနမေ့ဟုတျတနေ့ ဒီလိုအဖွဈဆိုးတှေ (သို့မဟုတျ)ဒီထကျဆိုးတဲ့အဖွဈမြိုးတှကေို ကိုယျ့သားသမီးတှလေကျထကျမှာ ကွုံရနိုငျတယျဆိုတာ သိထားဖို့လိုပါတယျ။
နောကျတဈခုက စီးပှားရေးသမားတှအေနနေဲ့ စီးပှားရေးစာအုပျပဲ စှတျဖတျနလေို့မရဘူး။ မွနျမာပွညျကိုဘယျသူတှေ ဘာပွောသလဲဆိုတာ အမွဲမကျြခွညျမမပွတျကွညျ့ထားဖို့လိုပါကွောငျး။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီနေ့ဒီလို စစ်မီးထတောက်မယ်ဆိုတာ Joshua Cooper Ramoက ၂၀၀၉လောက်ကတည်းကမှန်းခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဂျော့ရွှာကူပါးရာမို ဆိုသူဟာ Kissinger Associatesရဲ့ vice chairman and co-chief executive ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းပြောရရင် ကျနော်က ဟင်နရီကစ်ဆင်းဂျာကိုမကြိုက်ပါ။ လူလည်ကြီးလို့မြင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာ့အရေးအခင်းတွေမှာ သူတို့ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတာကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
သူ့ရဲ့”The Age of the Unthinkable”က ကမ္ဘာ့အရေးအခင်းတွေအကြောင်းဆက်စပ်နားလည်လိုသူတွေ ဖတ်သင့်တဲ့စာအုပ်ပါ။ ဇာတ်လမ်းကဘယ်ကစသလဲဆိုတော့ နက်ဆင်းတာလပ် (Nassim Taleb)က The Black Swam ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာသူက အချို့ကမ္ဘာ့အရေးအခင်းတွေဟာ ကြိုတင်မှန်းဆထားလို့ မရဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဥပမာ ၉၁၁တိုက်ခိုက်မှု၊ ၂၀၀၄ဆူနာမီလိုဟာမျိုး၊ ၁၉၈၇စတော့ဈေးကွက်ပျက်မှုမျိုးတွေကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒါကိုဂျော့ရွှာရာမိုက ပြန်ငြင်းပါတယ်။ သူက မှန်းလို့ရတာတွေရှိတယ်။ မီးအသေးက မီးအကြီးကြီးလောင်မှာကို တားဆီးပေးတတ်သတဲ့။
ဆီးရီးယားလို အာဏာရှင်စနစ်အောက်က နိုင်ငံမျိုးဟာ volatile ထပေါက်ကွဲလွယ်တယ်လို့ သူကကြိုတင်မှန်းဆခဲ့တယ်။ အီတလီလိုနိုင်ငံမျိုးမှာ လူထုဆန္ဒပြမှုတွေ ဖြစ်နေတာ ခဏခဏဆိုပေမယ့် စနစ်တစ်ခုလုံးပြောင်းလောက်အောင် မဖြစ်ဘူးတဲ့။ အမေရိကန်မှာလည်း လူဖြူလူမည်းပြဿနာအရေးအခင်းမျိုးတွေ ထဖြစ်တတ်တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ မီးအကြီးကြီးလောင်မှာ မစိုးရိမ်ရဘူး။
အဲ့မှာသူပြောထားတာက “Syria or North Korea or Burma do not have small burns;afire there could quickly becomeadevastating catastrophe.”တဲ့။
ဆီးရီးယား၊ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာ လူထုအုံကြွမှုအသေးလေးတွေ ခဏခဏမဖြစ်အောင် ထိန်းချုပ်ထားတယ်။ အေး…မဖြစ်လိုက်နဲ့။ ဖြစ်လိုက်ရင်တပြည်လုံးမီးဟုန်းဟုန်းတောက်မယ့် အုံကြွမှုကြီး ထဖြစ်နိုင်တယ်လို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်ကျော်ကတည်းကမှန်းထားခဲ့တယ်။
သူမှန်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဆီးရီးယားလည်းပြည်တွင်းစစ်အကြီးအကျယ်ထဖြစ်သလို၊ မြန်မာပြည်လည်း ယနေ့အခြေအနေထဖြစ်တာပဲ။ “သဘောက တိုင်းပြည်ငြိမ်သက်ရင်ပြီးရော ငါတို့က ဘာနိုင်ငံရေးမှ စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ လုပ်နေလို့မရဘူး” အာဏာရှင် အုပ်စိုးတဲ့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ မဖြစ်နဲ့ဖြစ်ရင်အကြီးကြီးထဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ သိထားဖို့လိုတယ်။
သူပြောထားတာရှင်းတယ်။ ရေတိုနဲ့ရေရှည်ကို တွက်ပြသွားတာ။ In the short run, low volatility means stability. ရေတိုမှာတော့ လူထုက အသံမထွက်ဘူးဆိုရင် တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်တယ်လို့ယူဆကြတယ်။
In the long run, though, low voltality leads to increased vulnerability. ရေရှည်မှာ အဲ့လိုအသံမထွက်ပဲ လူတွေမကျေနပ်တာက ပိုပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းပါသတဲ့။
၂၀၁၂ဦးသိန်းစိန်ခေတ်မှာသွားပြောရင် အရူးလို့ထင်ကြမယ်။ ဦးသိန်းစိန်ခေတ်မှာ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေအများကြီးရတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေက တကယ်အာဏာမသိမ်းတော့ဘူးထင်ပြီး ချီးကျူးကြတယ်။ ချောင်းပေါက်အောင်လာလိုက်တဲ့ သမ္မတတွေဆိုတာ နေ့တိုင်းလိုလို တွေ့ရတယ်။
မြန်မာပြည်တကယ်ပွင့်ပြီဟဲ့ဆိုပြီး ထောက်ပံ့ငွေတွေ၊ ချေးငွေတွေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေတွေ ဝေါကနဲဝင်ချလာတယ်။ ဦးသိန်းစိန်ကလည်း ရသမျှကို ရေတိုအတွက်ပုံအောသုံးတယ်။ မုန့်ဝေတဲ့ခေတ်ပေါ့။ လူတွေလက်ထဲငွေရောက်ပြီး ပျော်စေရမယ်။
ဒါပေမယ့်ရေရှည်အတွက် ဘာမှသေချာမစီမံနိုင်ခဲ့ဘူး။ နောက်နောင်အာဏာမသိမ်းအောင် သူအာမမခံနိုင်ခဲ့ဘူး။ အိမ်ဈေးမြေဈေးတွေထိုးတက်တော့လူတွေပျော်ကြတယ်။ တကယ်တော့ ပုံမှန်တစ်လ (၅)သိန်းဝင်တဲ့လူတစ်ယောက်က ရိုးရိုးသားသားရှာဖွေရင် အနည်းဆုံးသိန်း (၅၀၀)လောက်ပေါက်တဲ့ တိုက်ခန်းကို ဘယ်လိုဝယ်မလဲ ရေရှည်အတွက်မတွေးခဲ့ဘူး။
အဲ့ဒီခေတ်မှာ ခရိုနီတွေ၊ ပရောဂျက်ရသူတွေ၊ မြေသမားတွေအကြီးအကျယ်ကြီးပွားတာပဲမြင်ခဲ့ကြတယ်။ ပြည်ပကနေ မြန်မာ့မြေဈေးကွက်ကို ဝင်မွှေပြီး ငွေထုပ်ပိုက်လစ်သွားတဲ့ မျောက်အဝယ်တော်တွေကို မမြင်ခဲ့ကြဘူး။
ပိုဆိုးတာက အထွက်မှာ ထွက်ကန်ကန်ပြီး နိုင်ငံပိုင်မြေတွေကို လက်သိပ်ထိုးရောင်းခဲ့တာ။ ထွက်ခါနီးမှ ကိုယ့်လူကိုကိုယ်ကြိတ်ပြီး ပရောဂျက်တွေပေးခဲ့တာတပြုံကြီးပဲ။
အန်အယ်လ်ဒီ လက်ထက်မှာကျပြန်တော့ ထိန်းချုပ်မှုတွေလုပ်ပေမယ့်လည်း တဖက်မှာ လုပ်သင့်တာကိုမလုပ်၊ မလုပ်သင့်တာတွေကို လုပ်ခဲ့တာတွေရှိနေပြန်တယ်။
ကျနော်တို့က ထောက်ပြရင်တောင်မှ အရောင်မျိုးစုံတပ်ပြီး ဆဲကြသေးတယ်။ပိုဆိုးတာက အမတ်အချို့က နေ့ရောညပါ ဖိပြီးမကြိုးစားတာ။ အရိပ်ခိုလိုက်နေခဲ့တာ။ ထားပါတော့။ အခုရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာအရ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့အရေးကို ပိုမိုလေ့လာသင့်တယ်လို့ မြင်တယ်။
Kissinger Associates ကလူတွေရဲ့အမြင်ကိုလည်း “ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကို သူတို့ဘယ်လိုမြင်သလဲ”ဆိုတာ သတိနဲ့စောင့်ကြည့်သင့်တယ်။ ကျနော်တို့တွေဟာ မျက်တောင်တစ်ဆုံးပဲကြည့်ပြီး ဆူလွယ်ဆဲလွယ်နေလို့မရဘူး။ ရေရှည်မှာ ဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ကြိုတွက်သင့် လိမ္မာပါးနပ်သင့်ပြီလို့မြင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာနေရသ၍ ဘယ်တော့မှအေးချမ်းနေတယ်လို့ပြောလို့မရပါ။ အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကို ပြန်သွားတာနဲ့ တနေ့မဟုတ်တနေ့ ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေ (သို့မဟုတ်)ဒီထက်ဆိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကို ကိုယ့်သားသမီးတွေလက်ထက်မှာ ကြုံရနိုင်တယ်ဆိုတာ သိထားဖို့လိုပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက စီးပွားရေးသမားတွေအနေနဲ့ စီးပွားရေးစာအုပ်ပဲ စွတ်ဖတ်နေလို့မရဘူး။ မြန်မာပြည်ကိုဘယ်သူတွေ ဘာပြောသလဲဆိုတာ အမြဲမျက်ခြည်မမပြတ်ကြည့်ထားဖို့လိုပါကြောင်း။
တရုတျတှအေငနျးမရလိုခငျြနတေဲ့ မွနျမာမွရှေား (Rare Earth)အကွောငျး
ကိုယျဝနျရှိနတောကွောငျ့ ၎င်းငျးရဲ့အသကျကို ခမျြးသာပေးဖို့ သားသတျရုံက အလုပျသမားကို ဒူးထောကျတောငျးပနျရငျး မကျြရညျမြားကနြခေဲ့တဲ့ ကြှဲမကွီး